MPA Management Effective | Reef Resilience
Fitsipika 1: Fitantanana MPA mahomby
Ny fitantanana mahomby, anisan'izany ny fanomezana tombontsoa ny fiarahamonina sy ny fampihenana ny fandrahonana, no fototry ny paikady azo itokisana.
Ny Fitantanana mahomby dia manondro ny fampihenana ny fandrahonana ao amin'ny MPA, indrindra indrindra, ny hetsika isan'andro ataon'ny mpitantana ary koa ny ezaka lehibe kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina hamahana ny olana toy ny fandotoana eo an-toerana, ny fampandrosoana ny morontsiraka tsy voalamina tsara ary ny fomba fanjonoana manimba.
Ireo toeram-ponenana amoron-dranomasina sy ny soatoaviny sy ny tanjony dia mora vidy amin'ny hetsika manimba. Ny fihoaram-pefy manimba dia mampihena ny fahasalamana sy ny vokatra ateraky ny tontolo iainana, anisan'izany ny karazana miaina ao anatin'izany, ka miteraka fihenanam-piainana ara-tontolo iainana.
harato any Seychelles. Sary © Jason Houston
Asio faritra tsy misy toerana ho an'ny taona maharitra (20-40 taona), indrindra raha maharitra
Ny tombontsoa sasany dia azo tsapain-tanana ao anatin'ny fotoana fohy (1-5 taona) indrindra raha tsy mavesatra ny fanjonoana, fa ny fiarovana ny 20-40 taona dia mamela ireo karazam-biby be trondro sy ireo karazana biby mpiremby lasibatra ela velona (ohatra, antsantsa sy haran-dranomasina hafa. mpiremby) ny fahafahana mitombo ho amin'ny fahamatorana ary noho izany dia mandray anjara bebe kokoa amin'ny fandraisana sy ny fanavaozana ny tahiry. Ny fiarovana 20-40 taona (na fiarovana maharitra) dia ahafahan'ireo tombotsoan'ny jono sy ny ekôsiôstôma ireo haharitra. ref
Any amin'ny faritra be trondro, ny fiarovana amin'ny fotoana fohy dia mety hitondra soa ho an'ny karazana sasany, saingy ho very ny tombontsoa toy izany rehefa misokatra ho an'ny jono ny faritra raha tsy voakarakara tsara. ref
Manatsara sy mampihena ny fitaintainana
Manakana ireo hetsika mandringa manerana ny faritra fitantanana. ref
Ahitsio ny tebiteby toy ny fandrosoana, ny fandotoana ny tany, ary ny fiantraikany amin'ny fialantsasatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny fiarahamonina. Izany dia hanome karazana safidy lehibe kokoa hialana amin'ireo korontana lehibe, toy ny fisehoan-javatra marefo. ref
Ny fampiharana mivantana ny fitantanana mivantana sy ny fanatsarana ny fanarenana ny vondrom-piarahamonina coral izay nisy fiantraikany (ohatra, fanesorana alg, herbivore enhancement, ary fitantanana ny jono).
Ampidiro ny MPA amin'ny sehatra fitantanana misimisy kokoa
Ny tambajotra misy faritra voaro mafy ao anatin'ny rafitra fitantanana misimisy kokoa dia mety ahitàna tahirin-tsakafo midadasika be dia be, azo tanterahina amin'ny fisian'ny jono maharitra, ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fiarovana ny tontolo iainana. ref
Ho an'ny tambajotran'ny MPA dia mety tafiditra amin'ny fitantanana fitantanana amoron-dranomasina mba ahafahana mifehy tsara ny fandrahonana avy amin'ny sisintanin'ny MPA.
jereo Fandrefesana ny fahombiazan'ny fitantanana ho an'ny loharanon-kevitra manokana amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny MPA, Adaptive Management mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fomba fitantanana sy politika, ary Fifandraisana mba hahatratrarana ny tanjona sy ny tanjona amin'ny fitantanana tsara kokoa.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamolavolana tambajotra manan-danja miaro ny seranan-tsambo mba hanatrarana ny fandrosoana amin'ny sehatry ny fitrandrahana, ny zavamananaina isan-karazany, ary ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ny tontolo iainana tropical:manokatra fisie PDF
Coral Reef Resilience Online Course, Lesona 6: Paikady fitantanana ho an'ny faharetana